Tekinoroji - Shandong Lanbeisite Educational Equipment Group Co, Ltd.
Ndeipi iyo Inonyorwa Surface tekinoroji yeLIMBEST LCD Bhodhi?
Chinyorwa chekunyora chine zvikamu zvitatu, iyo yekumusoro iri PET inoonekera firimu ine ITO inoyerera rimwe divi, yepakati simende inoumbwa neyemvura kristaro, uye yepazasi layer ndiyo PET isinga bude dema firimu ine ITO inoyerera mutsara pane imwe divi. Iwo ma polymerizable monomers akanyungudutswa mune emvura yekristaro system inogona kukurumidza kubatanidzwa mu polymer network uye iyo mvura kristaro system inogona kuumba mizhinji-masisitimu dhizaini neyakaunganidzwa mwaranzi ye ultraviolet mwenje uye infrared mwenje neimwe nguva uye kusimba. Screen yekunyora inoita iyo yecrystal kristallita kuumbwa kwemapuraneti kuburikidza nekumanikidza kubata kuratidza iwo kunyora uye kushandura kuva yematic mameseji kuburikidza nemagetsi wakaiswa, uyezve inoshanduka kuva yechinongedzo-yekutsanangudza kujekesa kunyora pachiratidziri.
Nei takagadzira LCD bhodhi? Ndezvipi zvakanakira kupera vashandisi?
Tsamba dzekarebhodhi dzakavakirwa pakatarwa kunyorwa dzinoburitsa guruva rakawanda mukati mekunyora nekupukuta, izvo zvinoisa pangozi hutano hwevadzidzisi nevadzidzi. Kunyora pawhiteboard kunodya akawanda emakeni unoburitsa kunhuhwirira kusingafadzi. Kutarisa pamagetsi ekuonesa michina (flat panhare, LCD yekubata panhare, elektroniki whiteboard, nezvimwewo) kwenguva yakareba ichaita kukonzeresa kwekutadza uye kukuvadza maziso evadzidzi. LONBEST LCD Kunyorera bhodhi yakanyatsogadzirisa dambudziko reguruva-kusvibisa. Iwe unogona kunyora ne chero zvinhu zvakaoma pane bhodhi, kunyange zvigunwe zvedu.
Iyo yekuratidzira musimboti weE-kunyora bhodhi yakavakirwa pane yekunze mwenje kuratidzira, hapana yemagetsi mwaranzi; maziso haane simba, haana kutsamwa zvachose. Mavara ekunyora ari pabhodhi anoonekwa kubva pamamita makumi matatu kure nekuda kwekusiyana kwakasiyana Ultra-wide visual angle inoita kuti zvijeke kuti uone kubva kune chero kona yekamuri. Imwe bhatani kurasa rinotsiva bhuku kupukuta kuti uchengetedze nguva. Kunze kwezvo, kusarura zvishoma kunowanikwawo. Pfungwa imwe neimwe iri pabhodhi inogona kudzimwa zvakadzokororwa kwenguva 100,000. Nekuchengetera nekukurumidza uye kuchinjanisa kutapurirana, kunyorwa kwacho kunogona kugadzirwa otomatiki uye kuchengetwa kumidziyo yakaita senge mbozha mbozha, malaptop, kupa zvinyorwa zvemagetsi zvakanakira kutarisa chero nguva uye chero kupi.
Tinodzora sei zvigadzirwa zvemhando
Tsvina-isina kugadzirwa nharaunda
Kuomesa bvunzo yeiyo firimu zvinyoro
Sheet kuramba bvunzo yefirimu mbishi zvinhu
Mhute-chiratidzo chekuedza kwehafu-yakagadzirwa zvigadzirwa
Yakanyanya nharaunda bvunzo
Wear-kuramba bvunzo yebhodhi pamusoro
Kufambisa turbulence simulation bvunzo
Kupedzwa kwechigadzirwa chemhando yepamusoro
Ndeapi ma patent atinayo eLCD bhodhi?
Nyika Dzese Patents Dzakatenderwa: 52 & Nyika Dzese Patent Dzakatenderwa: 23
KUFUNGWA KWENYAYA DZAKANYANYA FILM, MethOD, IMI-VANYENGA VANOTI KUSVIRA CIRCUIT uye KUPINYESA SYSTEM CAPABLE YEMAHARA
【明 の 名称】 部分 部分 可能 み み ィ 、 、 多 多 多 出力 出力 決 決 ム ム ム ム ム ム.
Japanese / Shona / 1 Peter: 4 Japanese / Shona 필름 필름 부분 부분 부분 부분 부분 부분 부분 부분 【【시스템
European Patents Sangano （EPO）
Mvumo dzakashanda dzichifukidza nyika makumi mashanu nenomwe
European Patents Sangano （EPO）: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Kupro, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg , Malta, Monaco, Iyo Yugoslav Republic yeMacedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Bosnia neHerzegovina, Montenegro, Morocco, Republic of Moldova.
Switzerland uye Liechtenstein.